Zeblaze VIBE Lite စမတ်လက်ပတ်နာရီ၏စျေးနှုန်း ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်းဖုန်းများ » စမတ်နာရီ » Zeblaze VIBE Lite စမတ်လက်ပတ်နာရီ
အစမိုဘိုင်းဖုန်းများစမတ်နာရီZeblaze VIBE Lite စမတ်လက်ပတ်နာရီ
Zeblaze VIBE Lite စမတ်လက်ပတ်နာရီ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ဇွန်လ 2019 17 4: 03
iOS နဲ့ Android စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားများအတွက်များအတွက်စျေးနှုန်းသမိုင်းနယူး Zeblaze VIBE Lite 5ATM waterproof အရေးပေါ်စမတ်နာရီ 24 လကို standby အချိန်အားလုံး-မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်
€ 21,60 - 2019 15 ဇွန်လ
€ 21,56 - 2019 14 ဇွန်လ
€ 21,50 - 2019 12 ဇွန်လ
€ 21,53 - 2019 11 ဇွန်လ
€ 21,52 - 2019 10 ဇွန်လ
€ 21,60 - 20197ဇွန်လ
€ 21,69 - 20196ဇွန်လ
€ 21,63 - 20195ဇွန်လ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 39,99 - 2018 20 နိုဝင်ဘာလ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 19,20 - 2019 28 မတ်လ
နယူး Zeblaze VIBE Lite 5ATM waterproof အရေးပေါ်စမတ်နာရီ 24 လကို standby အချိန်အားလုံး-မိုးလေဝသစောင့်ကြည့် ...
Zeblaze VIBE Lite အဆောက်အဦးအပြင်အားကစားစမတ်နာရီ Bluetooth ကိုစမတ်5ATM စက်များ waterproof အားကစားကြံခိုင်ရေး ...
Zeblaze VIBE Lite Bluetooth ကိုစမတ်နာရီ 5ATM waterproof Smart Watch အားကစားကြံ့ခိုင်ရေး Tracker 24-လ ...
Long ကကို standby စမတ်အားကစားကြံ့ခိုင်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုခြေရာခံခြင်း Zeblaze VIBE Lite5ATM စက်များ waterproof အားလုံးရက်ကြာ 24 လ
Zeblaze VIBE Lite Smart Watch5ATM စက်များ waterproof အားကစားလက်ကောက်လက်ပတ်ကြံ့ခိုင်ရေး tracker ...
သွက်နဲ့လှပတဲ့ပတ်ပတ်လည် display ကို screen နဲ့ TPU watchband နှင့်အတူနယူးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း။
●5 ATM စက်များ waterproof
ခက်ခဲတဲ့နှင့်တာရှည်ခံ။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် 50m မှတက်ရေစိုခံ, နေ့စဉ်ဘဝနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများလိုအပ်ပါတယ်တွေ့ဆုံရန်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, တိကျ pedometer function ကိုကျင့်သုံးဘို့ဤအထူးပြုအားကစားလက်ပတ်နာရီ, မီးရှို့ရာခြေလှမ်းများ, လှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေးနှင့်ကယ်လိုရီရေတွက်။ ဒါ့အပြင်အားကစားလှုပ်ရှားမှုများရက်စွဲသိပ္ပံနည်းကျနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းရည်မှန်းချက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး status ကိုအချိန်မရွေးထိန်းသိမ်းပါမှရရှိနိုင်သည့် App ကို Uwatch မှ upload တင်လို့ရပါတယ်။
Zeblaze စမတ်လက်ပတ်နာရီရဲ့ built-in Bluetooth ကိုသင့်ရဲ့လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး၏အစွန်အဖျားမှာအားလုံးဖွင့်အတွက်, အခြားသူများအကြား 4.0 မိုဘိုင်းဖုန်း app ကိုအချိန်မှတ်နာရီ, ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS အကြောင်းကြားစာ, နှိုးဆော်သံနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချိတ်ဆက်ဖို့။
CR2430 (ဂျပန် Maxell) ဘက်ထရီစူပါရှည်လျား standby အချိန်သည်နှင့်အတူ, standby အချိန်သည်အောက်မှာ-saving mode ကို 12 လအတွင်းထက်နောက်ဆုံးပိုပြီးပုံမှန် 24 လ, ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အားသွင်းဖို့လိုအပ်မရှိပါ။
ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း: ဘလူးတုသ် 4.0
ကနျြးမာရေး tracker တွင်အိပ်စက်ခြင်းု့ကပ်ရေး
သည်အခြားအမည်: နှိုးစက်, Bluetooth နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, ရေစိုခံ
သတိပေးချက်အမျိုးအစား: Facebook က, Skype ကို, Twitter WeChat, WhatsApp ကို
remote control function ကို: ဝေးလံခေါင်သီကင်မရာ
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: Button ကိုဆဲလ် CR2430
ပြည်သူ့: အမျိုးသမီးစားပွဲ, အမျိုးသားစားပွဲပေါ်မှာ
Dial နှင့် Band
ယင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏ပုံသဏ္ဍာန်: က Round
ရရှိနိုင်ရောငျ: Black, White,
လိုက်ဖက်တဲ့: အန်းဒရွိုက် 4.3 / iOS ကို 7.0 နှင့် system အထက်
လိုက်ဖက်တဲ့ OS ကို: Android, IOS ကို
ဘာသာစကား: အာရဗစ်, အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ပေါ်တူဂီ, ရုရှ, စပိနျ
အရွယ်အစား Dial: 43 x ကို 43 x ကို 11.7mm
package အရွယ်အစား (L ကိုက x W x ကို H ကို) x ကို 10.00 8.00 6.50 စင်တီမီတာက x / x ကို 3.94 3.15 2.56 လက်မ x
package အလေးချိန်: 0.1680 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 0.0683 ကီလိုဂရမ်
Package Contents: စမတ်နာရီ 1, 1 အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ် x x
Zeblaze Vibe Lite ကိုစမတ်နာရီလုပ်ဆောင်ခြင်း & ဆန်းစစ်ခြင်း!
Zeblaze VIBE Lite: လူပျိုတာဝန်ခံအပေါ် 24 လအတွင်း! လက်ကမ်း Preview ကို
Zeblaze VIBE Lite စမတ်လက်ပတ်နာရီဗီဒီယိုများ
" 'Zeblaze VIBE Lite စမတ်လက်ပတ်နာရီကိုဒီထုတ်ကုန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုမှပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel
စမတ်နာရီ KingWear KW18 ဆင်းမ်ကဒ်နှင့်ခေါ်ရန်
စမတ်နာရီ LYW9 ဆင်းမ်ကဒ်နှင့်ခေါ်ရန်
Xiaomi က Mi Huamei AmazFit GPS စနစ်နာရီ
Garmin Fenix ​​GPS စနစ် 5X Plus အားစမတ်လက်ပတ်နာရီ
စမတ်အားကစား Xiaomi ကဂျီပီအက်စ် AmazFit စောင့်ကြည့်
Xiaomi က Mi Band4က Black (Black က)
UNIC P1 + DLP mini ကိုပရိုဂျက်တာ